Sidoo kale waxaa jira aan la xidhan karo naftaada saaxiibkiisa? Sidee loo xidhan karaa?
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Sidoo kale waxaa jira aan la xidhan karo naftaada saaxiibkiisa? Sidee loo xidhan karaa?
saaxiibkiisa Soul, sababtoo ah waa waxa kasta oo kale waxaa soo jiitay by nafta, sidoo kale inta badan waa haddii kulmeen waa in aan is guursano iyo horumarinta sida ay tahay xidhiidh haddii ay tahay galmo ka soo horjeeda. Si kastaba ha ahaatee, naf saaxiibkiisa waa daruuri ma aha lamaanahaaga guurka. Koox
of qaddar in marar badan noloshooda hore Meguria 'waxa ay noqon lahaayeen la joogo ka hor hay'adda guurka waxaa lagu taagaa. Sababtan awgeed, naf saaxiibkiisa waxaa sidoo kale la kara in ay yihiin aan la Wadaage guur oo loo siman yahay.
Intaa waxaa dheer, haddii kasta oo kale oo ku xiran yihiin ay xiriir qoto dheer, dadka doono qaar ka mid ah in sameeyo si gaar ah ma ku saabsan qaab guurka. Sidoo kale waa suurto gal ah in ay la kulmaan naf saaxiibkiisa ahaa lama huraan in qaddar ayaa soo jiitay, bal si ay u horumariyaan halkaas uga guurka ayay aad si.
haddii gabi ahaanba in aad rabto in aad guursato saaxiibkiisa naf, waxaa muhiim ah in ay sii riixaya barta lagama maarmaanka u ah ujeedada in. In
si ay u xiran yihiin ee nafta
, si ay u noqdaan in la xidhan naftiinna saaxiibkiisa, waxa dhibic waa idinka mid ah samayn?
? naf saaxiibkiisa
saaxiibkiisa nafta ma aha hal qof oo ah waa qof dhisay xiriir qoto dheer nolosha hore, sidoo kale waa qofka uu saxiixay mar kasta oo ay sidoo kale dammaanad adag halka beddelo xiriirka. Xiriirka ayaa sidoo kale waa in lagu daro in lamaanahan ayaa laga yaabaa in qoyska ka tirsan ama saaxiib dhow, soo horjeeda. Sababtan awgeed, naf saaxiibkiisa khasab ma aha in hal qof. Waa maxay sababta ma jirto qof la kulmi karaan ama in hadda nolosha.
? naf saaxiibkiisa inay soo qabtaan kulan aura ee
marka in ay la kulmaan naf saaxiibkiisa waxaa mararka qaarkood loo yaqaan markii ugu markii ay jidka nolosha uu noqday wanaagsan ah oo firfircoon. Tusaale ahaan, waxaan helay abaal ah, sida shaqada iyo hiwaayadaha, sida yimid si ay uga hortagaan in fashion ah oo kala duwan oo ilaa hadda, waa markii uu soo baxay tamarta wax naftaada in. Aynu qabsadaan si aanay u seegi la Fidneeyey oo caynkaas ah.
naf saaxiibkiisa in ay ogaadaan in ay si qoto dheer ku xiran yahay _-lamaanahaaga waa xiriir in koraa la polish kasta oo kale oo nafta midba midka kale. Marka aan dadka u muuqdaan kuwo ay isku naf la kulmay, aynu ogaadaan in xidhan dadka iyo maskax si qoto dheer. In culayska la saaro xidhiidhka xagga ruuxa ka badan xiriirka jirka, wuxuuna aad u dhibi dareen kala beddelashada tamarta ah midba midka kale, waxaad sii qoto kartaa gooyeen.
? Marka aad la si taxadar leh
naf saaxiibkiisa muuqday in tub ah ka hor tagaan, waxa la sheegay in ay jiraan dad badan oo markay taagan tub ee noloshayda in aan u socon. Waagaas ama xoog siiyey, qofka ama la kariyay fursad ay si weyn u bedesho sida ay u hadda ka socdaan, si loo dhaco bond si qoto dheer ruuxiga ah, waayo waxaa jira hannaankii badan si ay u sii socda wada dheer guursaday waa. Marka u muuqataa qofka aan nolosha bedelay, fadlan tarto xidhiidhka.
tamarta mar walba wanaagsan taangiga buuxda si ay u sii wehelkaaga
, marar badan nolosha la soo dhaafay oo hore waa la Wadaage in uu si joogta ah u ahayd kulan, waa xidhiidhka ka dhexeeya kasta oo kale waxaa si xoog leh soo jiidatay by nafta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan gobolka in sawiri tamarta nafta ku filan, waxa sidoo kale in Koox ka mid ah nafta ma awoodo inay soo qabtaan iyaga u gaar ah.
Sidaa darteed, waxa uu noqonayaa mar walba wanaagsan in nolol maalmeedka, waa muhiim in ay u soo jiitaan saaxiibkiisa naf si ay u sii tamar buuxda.
Marka aad naftaada x000D_ saaxiibkiisa kulmi waa, waxa la sheegay in ay jiraan dad badan oo markay taagan tub ee noloshayda in aan u socon. Waagaas ama xoog siiyey, qofka ama la kariyay fursad ay si weyn u bedesho sida ay u hadda ka socdaan, si loo dhaco bond si qoto dheer ruuxiga ah, waayo waxaa jira hannaankii badan si ay u sii socda wada dheer guursaday waa. Marka u muuqataa qofka aan nolosha bedelay, fadlan tarto xidhiidhka.